Madaxweyneyaashii Hore Ee Dalka Oo Maanta Safar U Ah Kismaayo – Bandhiga
Madaxweyneyaashii Hore Ee Dalka Oo Maanta Safar U Ah Kismaayo
Sida ay sheegayaan warar goor dhow soo gaaray warbaahinta Bandhiga ee magaalada Muqdisho, madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta socdaal u ah magaalada Kismaayo.
Ujeedka socdaalka madaxdii hore oo wafdigooda ay qeyb ka yihiin xildhibaanno, senatorro iyo masuuliyiin kale oo xisbiyada ah ayaa lagu sheegay ka qeyb galka xafladda caleema saarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe).
Kismaayo, waxaa iminka ku sugan madaxweynayaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan, xildhibaanno, senatorro, siyaasiyiin iyo masuuliyiin kale.
Horay, madaxweynihii 8aad ee dowladdii KMG ahayd Shariif Sheekh Axmed ayaa laga hor istaagay inuu u safro magaalada Kismaayo ee caasimadda u ah maamulka Jubbaland.
Dowladda federaalka ayaa wali diidan inay aqoonsato doorashadii bishii August dabayaaqadeeda ka qabsoontay Kismaayo oo uu ku soo baxay Axmed Madoobe, khilaafka dowladda federaalka iyo Jubbaland ayaana gaaray meeshii u sarreeysay wixii ka dambeeyay markii doorashada ay soo idlaatay.
Xayiraad dhanka duulimaadka ah oo saarnayd magaalada Kismaayo maalmihii dambe ayaa warar ay heshay Bandhiga waxay sheegayaan in xukuumaddu ay ka qaadday cadaadisyo ka soo food saaray dhanka beesha caalamka, se weli ma jirto cid arrintaasi xaqiijin karta.